မြန်မာဘက်က ထွက်ပြေးလာတဲ့ တရုတ်လောင်းကစားသမားများ။ (ဓာတ်ပုံ - Thai Police အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်တက်လာပြီး လူအသေအပျောက်တွေ များလာတဲ့အတွက် ကာစီနိုလောင်းကစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တရုပ်နိုင်ငံသားများ သန်းဂဏန်းရှိတဲ့ဘတ်ငွေကိုသယ်ဆောင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်မှုတွေများလာပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မအေးအေးမာက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ခရိုင် မဲဆိုင်မြို့ Phaholyothin လမ်းမပေါ်မှာ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ က တာချီလိတ်ဘက်မှ ခိုးဝင်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ခြောက်ဦးပါ ပစ်ကပ်ကား တစ်စီးဟာ ရဲဂိတ်ကို ဖြတ်ကျော်မောင်းပြေးခဲ့တာကြောင့် လမ်းတွေပိတ်ဆို့ ပြီး ရဲကားတွေက လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ တာချီလိတ်ကနေမဲဆိုင်၊ မြ၀တီကနေ မဲဆောက်ကို ထွက်ပြေးလာနေတဲ့ ကာစီနိုလောင်းကစားသမားတရုပ်နိုင်ငံသားတွေ ဖမ်းမိနေတယ်လို့လည်း ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
"အခု မနေ့ကပဲ တာချီလိတ်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၆ ယောက်က သူတို့ ကားတစီးက မဲဆိုင်ရဲဂိတ်ကို ဖြတ်မောင်းတော့ ရဲတွေက ပိတ်ဆို့ပြီးဖမ်းတာပေါ့။ မဲဆိုင်ရဲဂိတ်ကို ဖြတ်မောင်းတဲ့တရုတ်တွေကတော့ ပထမ ကားပေါ်က ဆင်းပြေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေး တပ်တွေက ပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းတော့ လက်ရဖမ်းမိတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ညကလည်း တရုတ်နိုင်ငံသား ၃ ဦး ဘတ်ငွေ သိန်း ၈၀ (ဘတ် ၈,၀၀၀,၀၀၀) နဲ့ အတူဖမ်းမိတယ် သောင်ရင်းမြစ်ကို ကူးလာပြီး မယ်ကုကင်းဆိုတဲ့ကျေးရွာဘက်ကနေ ကူးလာတာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာဘက်မှာ ကာစီနိုတို့ လောင်းကစားရုံတို့ စားသောက်ဆိုင်တို့မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ထားတာ သူတို့က တရုတ်ပြည်မကိုလည်း ပြန်လို့ မဖြစ်သေး၊ ဗီဇာသက်တမ်းကုန်နေတာတွေ ဖြစ်နေတာတွေကြောင့်အနီးဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့ကြတာဗျ။"
အင်္ဂါနေ့က ဖမ်းမိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲဆိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး Pol. Lt. Col. Nattawut Saengduean က သတင်းထုတ်ပြန်သွားရာမှာတော့ အခုဖမ်းမိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က လောင်းကစားရုံတွေမှာ အဓီကစီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို အသုတ်လိုက် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ထပ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ချင်းရိုင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ က လမ်းမတွေကို ပိတ်ဆို့ စစ်ဆေးရှာဖွေနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခု ထွက်ပြေးလာတဲ့ သူတွေက ရဲတွေရဲ့ အဖမ်းအဆီးကို မခံဘဲ ထွက်ပြေးတာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်လည်း ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးအရအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ဒီအတွက် သူတို့ကို ကိုဗစ်ထိမ်းချုပ်အရေးပေါ်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမှာဖြစ်သလို တခြားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေနဲ့လည်း အရေးယူသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူတို့ကို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ဆေးစစ်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။
အိမ်းနီးချင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးတွေ့ ရှိမှု မြင့်တက်လာချိန်ဒီလပိုင်းမှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးလာနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား အရေအတွက် ၁၀၀ ၀န်းကျင်လောက် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကပျရောဂါဖွဈနှုနျး မွငျ့တကျလာပွီး လူအသအေပြောကျတှေ မြားလာတဲ့အတှကျ ကာစီနိုလောငျးကစား စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တရုပျနိုငျငံသားမြား သနျးဂဏနျးရှိတဲ့ဘတျငှကေိုသယျဆောငျပွီး ထိုငျးနိုငျငံထဲကို ခိုးဝငျမှုတှမြေားလာပါတယျ။ ဒီသတငျးကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ မအေးအေးမာက ထိုငျးမွနျမာနယျစပျကနေ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး ခငျြးရိုငျခရိုငျ မဲဆိုငျမွို့ Phaholyothin လမျးမပျေါမှာ အောကျတိုဘာလ ၂၇ ရကျနကေ့ တာခြီလိတျဘကျမှ ခိုးဝငျလာတဲ့ တရုတျနိုငျငံသား ခွောကျဦးပါ ပဈကပျကား တဈစီးဟာ ရဲဂိတျကို ဖွတျကြျောမောငျးပွေးခဲ့တာကွောငျ့ လမျးတှပေိတျဆို့ပွီး ရဲကားတှကေ လမျးကွောငျးပိတျပွီး ဖမျးဆီးခဲ့ရပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှာပဲ တာခြီလိတျကနမေဲဆိုငျ၊ မွဝတီကနေ မဲဆောကျကို ထှကျပွေးလာနတေဲ့ ကာစီနိုလောငျးကစားသမားတရုပျနိုငျငံသားတှေ ဖမျးမိနတေယျလို့လညျး ထိုငျးမွနျမာနယျစပျက မွနျမာပွညျသားမြားအရေးပူးတှဲလှုပျရှားမှု ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးမိုးကွိုးကအခုလိုပွောပွပါတယျ။
"အခု မနကေ့ပဲ တာခြီလိတျကနေ ခိုးဝငျလာတဲ့ တရုတျနိုငျငံသား ၆ ယောကျက သူတို့ ကားတစီးက မဲဆိုငျရဲဂိတျကို ဖွတျမောငျးတော့ ရဲတှကေ ပိတျဆို့ပွီးဖမျးတာပေါ့။ မဲဆိုငျရဲဂိတျကို ဖွတျမောငျးတဲ့တရုတျတှကေတော့ ပထမ ကားပျေါက ဆငျးပွေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ လုံခွုံရေး တပျတှကေ ပိုကျစိတျတိုကျဖမျးတော့ လကျရဖမျးမိတယျ။ အောကျတိုဘာလ ၂၄ ညကလညျး တရုတျနိုငျငံသား ၃ ဦး ဘတျငှေ သိနျး ၈၀ (ဘတျ ၈,၀၀၀,၀၀၀) နဲ့ အတူဖမျးမိတယျ သောငျရငျးမွဈကို ကူးလာပွီး မယျကုကငျးဆိုတဲ့ကြေးရှာဘကျကနေ ကူးလာတာ တရုတျနိုငျငံသားတှဟော မွနျမာဘကျမှာ ကာစီနိုတို့ လောငျးကစားရုံတို့ စားသောကျဆိုငျတို့မှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှေ လုပျထားတာ သူတို့က တရုတျပွညျမကိုလညျး ပွနျလို့ မဖွဈသေး၊ ဗီဇာသကျတမျးကုနျနတောတှေ ဖွဈနတောတှကွေောငျ့အနီးဆုံး ထိုငျးနိုငျငံဘကျကိုခိုးဝငျဖို့ ကွိုးစားလာခဲ့ကွတာဗြ။"
အင်ျဂါနကေ့ ဖမျးမိတဲ့ တရုတျနိုငျငံသားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မဲဆိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူး Pol. Lt. Col. Nattawut Saengduean က သတငျးထုတျပွနျသှားရာမှာတော့ အခုဖမျးမိတဲ့ တရုတျနိုငျငံသားတှဟော မွနျမာနိုငျငံဘကျက လောငျးကစားရုံတှမှော အဓီကစီးပှားရေးလုပျနသေူတှဖွေဈပွီး မွနျမာနိုငျငံဘကျက ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားနတေဲ့ အခွအေနကေနေ လှတျမွောကျဖို့ ထိုငျးနိုငျငံဘကျကို အသုတျလိုကျ ထှကျပွေးလာခဲ့ကွတာလို့ဆိုပါတယျ။
နောကျထပျ ထှကျပွေးလှတျမွောကျနသေေးတဲ့ တရုတျနိုငျငံသားတှကေိုလညျး ခငျြးရိုငျခရိုငျရဲတပျဖှဲ့က လမျးမတှကေို ပိတျဆို့စဈဆေးရှာဖှနေတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အခု ထှကျပွေးလာတဲ့ သူတှကေ ရဲတှရေဲ့ အဖမျးအဆီးကို မခံဘဲ ထှကျပွေးတာကွောငျ့ ထိုငျးနိုငျငံအတှကျလညျး ကိုဗဈထိနျးခြုပျရေးအရအန်တရာယျရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ ဒီအတှကျ သူတို့ကို ကိုဗဈထိမျးခြုပျအရေးပျေါဥပဒနေဲ့ အရေးယူမှာဖွဈသလို တခွားလူဝငျမှုကွီးကွပျရေး ဥပဒနေဲ့လညျး အရေးယူသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ သူတို့ကို ကိုဗဈကပျရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ဆေးစဈမှုတှေ ဆကျလုပျနပေါတယျ။
အိမျးနီးခငျြးဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါပိုးတှရှေိ့မှု မွငျ့တကျလာခြိနျဒီလပိုငျးမှာပဲ ထိုငျးနိုငျငံအတှငျး ထှကျပွေးလာနတေဲ့ တရုတျနိုငျငံသား အရအေတှကျ ၁၀၀ ဝနျးကငျြလောကျ ရှိပွီဖွဈပါတယျ။